Asus TUF Dash F15, ike na imewe nwere ike ịga aka na aka | Akụrụngwa Akụkọ
Asus TUF Dash F15, ike na imewe nwere ike ịga aka na aka
Miguel Hernandez | 25/07/2021 13:00 | General, Kọmputa, Laptọọpụ, Nyocha
Kọmputa Desktọpụ anaghị arịwanye elu na desktọọpụ, n'ezie, ọbụlagodi ndị egwuregwu kachasị egwu, ndị na-ege ntị maka ụdị kọmputa a, na-agagharị n'ụdị enwere ike ibugharị n'afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihi atụmatụ ọhụrụ na atụmatụ ndị siri ike ha na-enye.
Asus Dash F15, laptọọpụ egwuregwu na-egwu egwu nwere njiri mara mma na atụmatụ nke na-eme ya enyi na enyi, rutere na tebụl nnwale. Anyị ga-enyocha omimi nke laptọọpụ a ma ama nke nwere ike ịbụ na ị bịara n'ihi atụmatụ ahụ mana na ị ga-akwụsị ịzụta maka imewe ahụ, echefula ya.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ oge ndị ọzọ, ndị review zuru ezu video na n'elu ga-egosi gị unboxing na ya isi imewe atụmatụ. Echefula ịdenye aha na anyị YouTube channel ka anyị nwee ike ịga n’ihu na-ewetara gị ọdịnaya a na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ịnwere ike ịzụta ya na Amazon na ọnụahịa kacha mma.
1 Akụrụngwa na imewe: Mara mma na-enweghị obi ọjọọ
2 Ngwaọrụ na GPU na-ekwe anyị nkwa ọdịnihu
3 Njikọta nke ụdị nile
4 Ule na obi jụrụ
5 Multimedia na izugbe ahụmahụ
Akụrụngwa na imewe: Mara mma na-enweghị obi ọjọọ
Ọ bụrụ na enwere ihe na - eme m obi erughị ala banyere kọmpụta egwuregwu, ọ bụ akara ha na - eme ihe ike, agba agba ha na oke oke ha. Asus na TUF Dash F15 na-ewere nke a niile ma na-eme ka ọ dị ọcha, dị ka dayamọnd. Anyị nwere kọmputa nwere profaịlụ millimita 19,9, nke ngwakọ nke ọla na plastik na-ezute ụkpụrụ ndị agha MIL-STD, anwụ ngwa ngwa bụ akụkụ dị mkpa n'ozuzu ngwaahịa ASUS niile na nke a agaghị adị obere.
Anyị nwere nnweta maka agba abụọ, Moonlight White na eklips Grey (nke kachasị ọcha na ọchịchịrị ntụ). N'akụkụ nke elu anyị nwere mkpado mkpirisi TUF na akara ngosi ọhụrụ nke ika ahụ. Anyị enyochawo ihe nlereanya ahụ na agba ntụ gbara ọchịchịrị ka anyị wee lekwasị anya na ya. N'akụkụ abụọ anyị nwere ọdụ ụgbọ njikọ njikọ anụ ahụ nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. Ogwe ngosipụta, n'agbanyeghị na ọ dị ezigbo mkpa, nwere nnukwu iwe dị ala. Mkpokọta ibu nke 2 n'arọ, na-enweghị ịbụ panacea, dị mfe maka ihe ngalaba ahụ na-enye.
Ngwaọrụ na GPU na-ekwe anyị nkwa ọdịnihu
Anyị ga-amalite n'ụzọ doro anya na ihe kachasị mkpa, tebụl nkọwa nke anyị ji eme ka ihe nhazi ahụ pụta ìhè Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz na 4 cores (Ogwe 12M, ruo 4,8 GHz). Iji bugharịa ya, anyị nwere Windows 10 Home etinyere na Windows 11 na-akwụghị ụgwọ. Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ihe atụ a na - esonyere ya ihe 8GB 4MHz DDR3200 nchekwa modul, nke nwere ikike nhazi nke kachasi 32 GB nke RAM.
Ihe nhazi: Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz na 4 cores
Nchekwa nke otu a nwalere bụ 512 GB nke M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD nchekwa nke ahụ na-enye ọsọ ọsọ na ule anyị nke 3400 MB / s guru na 2300 MB / s dee, ihe kariri iji megharia OS na egwuregwu vidio. Anyị nwere ike, ee, họrọ maka otu nkeji na ikike maka 1 TB.
Anyị lekwasịziri anya n'ihe dị mkpa, ndị NVIDIA GeForce RTX 3070 nke ga-ahụ maka ngalaba eserese na nke enyere na nsụgharị ya «laptọọpụ» arụmọrụ na Geekbenck nke ihe 121069, dị nnọọ nso na desktọọpụ mbipute nke NVIDIA GeForce RTX3070.
Njikọta nke ụdị nile
Anyị na-amalite na njikọta ahụ, N'akụkụ aka ekpe anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri ikike, ọdụ ụgbọ mmiri Gigabit RJC45 zuru oke, HDMI 2.0b, USB 3.2 na USB-C Thunderbolt 4 - Ike mgbapụta tinyere 3,5mm Jack. Maka aka nri anyị nwere USB 3.2 ọkọlọtọ yana Kensington keychain.
Ogwe 3,5 mm
N'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na mpaghara eriri ahụ zuru oke, ya na USB-C dakọtara na 4K nyochaa na 60Hz na ibu ruo 100W, maka ngalaba ikuku ọ nwere ike ịbụ obere. Anyị nwere Bluetooth 5.0 na WiFi 6, Akụkụ ikpeazụ a na ule anyị mepụtara mmetụta na-emegiderịta onwe ya na netwọkụ 5 GHz ebe oke a ka amachibidoro oke na ping nwere ike ọ gaghị adị ka ịchọrọ, anyị na-akwado iji eriri n'agbanyeghị oke ndakọrịta.
Ule na obi jụrụ
Na kọmputa nwere anọ Fans, 83 pupụtara ọ bụla, na mma mgbochi uzuzu jụrụ usoro. Ngwunye okpomoku ise na ngụkọta maka ngwaọrụ ahụ dum na nsonaazụ nke ahụ bụ ihe mmadụ ga-atụ anya na kọmputa nke ụdị a n'etiti oge ọkọchị, na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Agbanyeghị, anyị enwetaghị nsonazụ iwe ma ọ bụ nke ahụ gosiri ọdịiche dị iche na asọmpi ahụ, yabụ jụrụ oyi ahụ zuru ezu.
Zụta Asus TUF Dash F15 na Amazon
Na ule anyị, arụmọrụ kọmputa Na Cities Skylines, Call of Duty Warzone and CS GO anyị nwere ọnụego Fps dị elu, na-enweghị nsogbu arụmọrụ ọ bụla ma ọ bụ kpo oku. Maka ebumnuche doro anya, laptọọpụ ga-enwe ike ijikwa ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke katalọgụ gị n'ọnọdụ ọnọdụ nlele kachasị mma.
Multimedia na izugbe ahụmahụ
Anyị agaghị ahapụ na-enweghị ikwu banyere ihuenyo, anyị nwere 15,6-anụ ọhịa panel na 16: 9 ruru, Ọ na-amasị m ọgwụgwọ ya na-acha ọkụ ọkụ ma ọ nwere ike igosipụta 100 nke sRGB ụdịdị dị iche iche, na ọnụego ume ọhụrụ nke 120 Hz nke na-adịghị njọ maka otu IPS panel. N'ezie, ihie nwere ike ịka mma, ọ bụ ezie na anyị enwetabeghị data ziri ezi banyere nchapụta ya kwa cd / m2. Da doro anya ma sie ike zuru oke iji nwee ọ enjoyụ ọdịnaya multimedia, yana ebe dị mma n’ozuzu ya.
Anyị enweghị kamera kamera
Igodo ahụ nwere ezigbo njem, yiri ọtụtụ ụdị egwuregwu "gaminggba Cha Cha". Anyị nwere mpempe akwụkwọ ihuenyo na RGB LEDs n'akụkụ niile, yana ngụkọta nke 1,7mm. Ọ dị jụụ, ihe a na-enwe ekele, ọ na-azakwa nke ọma. Anyị enweghị ike ikwu otu ihe ahụ banyere trackpad, ọ dị ka obere na enweghị isi, mana ọ bụghị nsogbu na kọmputa a, mana ọ fọrọ nke nta ka ndị niile Apple anaghị emepụta. Anyị nwere obere ihe ọ bụla na-ekwu banyere obodo kwụụrụ, ọ ga-adabere nke ukwuu na ebre-chọrọ, nanị ihe karịrị awa abụọ, anyị nwere ike ikwu na ị na-eji ya ejikọrọ.
Laptọọpụ a akụkụ nke 1.299 maka nsụgharị ntinye ya, ruo euro 1.699 nke mbipute nke anyị nwalere, ihe na-adọrọ mmasị na ngwaọrụ ndị anyị nwere n'ahịa n'ihi atụmatụ ya na ike ya.
Ọnụ ego TUF F15
Ihe na: 25 2021 XNUMX
Mgbanwe ikpeazụ: 25 2021 XNUMX
Ihe ohuru ohuru na ihe eji emecha
Akụrụngwa iji kwekọọ na ọdịnihu
Ezi mmetụta nke ojiji na njikọta
Gụnyere ihe nkwụnye A / C kama USB-C
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Asus TUF Dash F15, ike na imewe nwere ike ịga aka na aka
SoloCam E20, igwefoto dị n'èzí nke si Eufy [Nyocha]